Soo dejisan Parkdale 3.00 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Parkdale
Parkdale – waa qalab aad ku tijaabiso waxqabadka diskka ee adag ee xaaladaha kala duwan. Nidaamku wuxuu ka caawiyaa sidii loo ogaan lahaa xawaaraha diiwaanka iyo akhrinta xogta laga soo qaaday darawal adag, USB-ga, qalabka farsamada ama isku xirka shabakada. Parkdale waxaa ku jira hab lagu barbardhigo nuqullo la heli karo oo kuu ogolaanaya inaad hesho macluumaadka guud ee ku saabsan xawaaraha xogta is-weydaarsiga iyada oo la raacayo cabbirrada dheeriga ah ee dhismayaasha iyo faylasha. Xaaladda kale ee Parkadle waxaa loogu talagalay in lagu tijaabiyo xawaaraha qalabka adag ee leh faylasha qaarkood, hubi xawaaraha duubista iyo xawaaraha marka la hayo xogta adoo isticmaalaya habka faylka. Mid ka mid ah habab badan ee software wuxuu awoodaa in uu tijaabiyo maqalka iyo akhrinta kaabaha adag adigoo isticmaalaya nidaamka faylka, sababtoo ah baaritaanka si toos ah ayaa loo marayaa qalabka. Parkdale wuxuu leeyahay interface dhexdhexaad ah oo fudud.
Go’aaminta xawaaraha duubista ee adag
Noocyada imtixaanka ee kala duwan
Imtixaan isku mar ah oo ku saabsan darawallada adag ee badan
Tijaabinta xawaaraha fiilooyinka leh nidaamka faylka iyo iyada oo aan
Soo dejisan Parkdale
Faallo ku saabsan Parkdale
Parkdale Xirfadaha la xiriira
"Defraggler" – waa qalab lagu carqaladeeyo wadista adag iyo feylasha gooni ah. Qalabka kumbuyuutareedku wuxuu iskaankayaa oo wuxuu soo bandhigayaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan disc.
Barnaamijkan wuxuu leeyahay qaybo badan oo qalab ah si loo hagaajiyo nidaamka oo guud ahaan wuxuu hagaajiyaa waxqabadkiisa siyaabo kala duwan.
Iftiiminta – software-ka waxaa loogu talagalay ka-shaqeynta tayeynta agabyada fiidiyowga iyadoo la adeegsanayo saameyno kala duwan oo muuqaal ah iyo si deg deg ah loogu soo geliyo fiidiyowga dhameystiran internetka.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu daabaco dukumiintiyada iyo sawirada qoraal kasta oo ka mid ah shabakada guud. Waxaad horay u soo dhigan kartaa dukumiintiyada intaadan u dirin mishiinka fog.